Mon, Aug 20, 2018 | 16:57:04 NST
11:37 AM (7months ago )
एकछिनलाई उनको नाम बिर्सनुहोस् । एकछिनलाई मात्र किन, सधैंलाई बिर्सनुहोस् । नाम अनुसार त उनले कहिल्यै केही गर्दै गरेनन् । न शेर झैं सधैं बलियो भएर टिकिरहन सके, न अरुले गर्नै नसकेको कुरा गरेर बहादुरी नै देखाए ।
न पहिले देखाए, न अहिले । ठाममा भएको बेला त नाम अनुसारको काम गरेर नदेखाउने मान्छेले अब झिटीगुण्टा बोकेर हिँडेपछि देखाउँछन् भनेर के विश्वास गर्नु ? उनको नाम र काममा एक रौं जति पनि विश्वास छैन । त्यसैले सधैंलाई नाम बिर्सनुहोस् । थर मात्र सम्झनुहोस् ।
उनको थर देउवा । देउवा र देउ बा भन्नु झण्डै उस्तै उस्तै । आफूलाई नभै नहुने कुरा केटाकेटीको हातमा छ भने मलाई त्यो देउ बा भनेर फकाउनुपर्छ । फकाएर केही चिज हात पार्नु छ भने देउ बा भनेर चिल्लो घस्नुपर्छ । अनि मात्र पाइन्छ ।
देउवालाई अर्को ढंगले पनि व्याख्या गरौं । देउ बा अर्थात दिने बा । जे मागेपनि दिन सक्ने बा । माग्दा मात्र किन ? नमाग्दा पनि दिन सक्ने बा । देउ पनि भनिरहन नपर्ने, खुरुखुरु दिइरहन सक्ने बा । दानी स्वभावका बा ।
देउ बाको जस्तै गुनिलो स्वभाव छ, देउवामा पनि ।
देउवा पहिलेदेखि नै अरुका लागि देउ बा जस्तै हुन् । पहिले उनले राजालाई प्रजातन्त्र दिए । प्रजातन्त्र दिंदा खल्तीमा भएको पैसा दिनुजस्तो महंगो पर्ने होइन । आफ्नो हातमा मात्र भएको, तर खल्तीमा नभएको कुरा दिंदा के घाटा भयो र ?
आफ्नो चुरीफुरी भएको बेला हातमा दिन सक्ने जे छ, त्यही दिने हो । त्योबेला प्रजातन्त्र थियो, राजालाई दिए । अहिले मनपरीतन्त्र छ, कहिले कार्यकर्तालाई दिन्छन्, कहिले अरु नागरिकलाई ।
कार्यकर्तालाई दाम दिनुअघि आफ्नै बिरोधीलाई आफू बसिरहेकै ठाम पनि दिएकै हुन् क्यारे । आफू जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै चुनाव गराएकै हुन् । चुनावमा हारिन्छ भन्ने जान्दाजान्दै अलोकप्रिय काम गरेकै हुन् । नागरिकलाई मनै नपर्ने काम गरेर जानाजान आफू बसेको ठाम वामहरुलाई दिएकै हुन् ।
वामहरुलाई मात्र ठाम दिएर पुगेन । अब दान पाउन बाँकी कार्यकर्ता र अरु नागरिकलाई धमाधम दाम बाँड्ने पालो आएको छ ।
त्यसमाथि अरु को हो को पराईलाई दिएको पनि होइन । आफ्नै मान्छेलाई दिएको । आफ्नै कार्यकर्तालाई दिएको । आफ्नै नागरिकलाई दिन खोजेको ।
मोरा वामेहरुले वृद्धभत्ता दिएरै त्यतिका भोट कमाए । वृद्धभत्ताको नारा लगाएरै चुनाव जिते । अब सरकार उनीहरुकै हातमा पुग्ने भो । मरिगए पनि उनीहरुको एकतालाई भाँड्न सकिएन । यही पाराले त वामेहरुले ५ वर्ष सरकार चलाउने भए ।
त्यसमाथि राम्रा राम्रा काम गर्छु भनेर घोषणापत्र बनाएका छन् । लिनुदिनु केही छैन, एकबारको जुनीमा देशकै लागि काम गरेर मर्ने हो भनेर ओली कमरेडले भाषण ठोकेका ठोक्यै छन् । ओलीको बोलीमा प्रचण्डले समेत लोली मिलाउँदैछन् । मुखले भनेजस्तो साँच्चै गरेर देखाएभने त ५ वर्षपछि पनि के हो के ? फेरि वामेहरुले नै भोट सोहर्न के बेर ।
यसपाली बल्ड्याङ खाएको पार्टी अर्कोपटक पनि उत्तानो टाङ लगाउने अवस्थामा पुग्यो भने त खैरत छैन । त्यसैले यसपाली वामहरुलाई ठाम दिएका दानी देउवा अर्कोपटकको चुनाव सोच्दै नागरिकलाई दाम बाँड्न व्यस्त छन् ।
६५ वर्ष उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिन्छु भन्दा आफ्नै नेता कार्यकर्तालाई पनि पैसा थपिन्छ । आफूले उहिलेदेखि नै वृद्धभत्ता लिन थालेको । श्रीमतीको उमेर पनि अब ६५ वर्ष पुग्न लाग्यो । दाह्रीजुँगा सेतै भैसक्दासमेत आफूलाई युवा भन्ने आफ्नै पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ता पनि ६५ वर्ष उमेर हाराहारीका भैसके ।
नागरिकलाई दिन्छु भनेको पैसा आफ्नै परिवार, आफन्त र नेता कार्यकर्ताको खल्तीमा पनि पुग्छ । पहिले आफ्ना आफन्त र कार्यकर्ता भएको नाताले पैसा पाएका थिए । अब ६५ वर्ष उमेर पुगेको हिसाबले पैसा पाउँछन् । दोहोरो फाइदा । यता नागरिक दंग, उता आफन्त र कार्यकर्ता फुरुंग ।
त्यसमाथि अहिले त दिइहाल्नुपर्ने पनि होइन । दिन्छु भने मात्रै पुग्छ । अहिलेलाई दिने काम देउवाको होइन । दिन्छु भनेको मात्र हो । देउवाको ठाममा जो गएर बस्छ, उसैले अहिले दिन्छु भनेको कुरा दिनुपर्छ । भए पनि दिनुपर्छ । नभए मागेर, खोजेर पनि दिनुपर्छ । देउवाजस्तो दानी मान्छेले दिन्छु भनेको कुरा नदिएर सुख ।
नत्र उबेला अरुलाई दिन मात्रै जान्ने दानी स्वभावका देउवालाई ठाम किन दिएको त ? ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै बिरोध गर्ने यिनै प्रचण्डले देउवालाई ठाम दिएका होइनन् र ? प्रचण्डलाई मात्र के दोष, उबेला प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवालाई प्रधानमन्त्री दिने एमाले होइन र ?
उबेला एमालेले देउवालाई ठाम दियो, देउवाले राजालाई प्रजातन्त्र दिए । अहिले प्रचण्डले देउवालाई ठाम दिए, देउवाले कार्यकर्ता र नागरिकलाई दाम दिए ।
ठाममा पुगेका सबैले कहाँ देउवाले जस्तो दिन सक्छन् ? आफैं मात्र लिन्छन्, दिंदैनन् । देउवाले त आफैं मात्र लिएका होइनन्, अरुलाई पनि दिएका हुन् । अरुलाई पनि दिन जान्ने अनुभवी र दिन सक्ने देउवा जस्तो दानी मान्छे अहिलेको जमानामा सितिमिति कहाँ पाइन्छ र ?